01 / 02 / 2018 04 / 02 / 2018 ဒံယလေက 2693 Views စာ2မှတ်ချက် 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, D2C, ပန်ကာဒီဇိုင်း, Ideas, Lego, Lego Ideas, micro, သေးသေးလေး, ပင်လယ်ဓါးပြ, တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, ထူးခြားသော
Lego Ideas အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့အစုံများအတွက်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့် 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော သေးထူးခြားတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်
စျေးနှုန်း: £ 69.99 / $ 69.99 / € 69.99 အပိုင်းပိုင်း: 962 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
နောက်ဆုံးပေါ် Lego Ideas အစုံ, 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, မှတ်ပုံတင် IP သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ထားပန်ကာအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူထောက်ခံသူ 10,000 ရောက်ရှိခဲ့သည်။ စီမံကိန်းမတိုင်မီကစီမံကိန်းများစွာကဲ့သို့စီမံကိန်းသည်ထိုအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအယူအဆနှင့်စံနမူနာတစ်ခုအနေဖြင့်သာလက်ခံခဲ့သည်။ အခုတော့ပရိသတ်တွေတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီ Lego ထုတ်လွှတ်နှင့်စင်ပေါ်မှာလုံးဝမူရင်းမော်ဒယ်ရှိသည်။ ဒီပစ္စည်းပစ္စယမှာသီးခြားအစိတ်အပိုင်းသုံးမျိုး - သင်္ဘောကိုယ်နှိုက်၊ ၎င်းမှာပါ ၀ င်မည့်ပုလင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုဖော်ပြရန်ရပ်တည်ချက်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြသနေသည် Lego တစ်ပုလင်းထဲမှာတင် ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလား။ သို့မဟုတ်ပါကသပ်ရပ်သောအယူအဆလော။
Lego Ideas 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော အလွန်ဆွဲဆောင်မှုမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Leviathan အမည်ရှိသေးငယ်သောပင်လယ်သွားရေယာဉ်မှသည်သေးငယ်သောသင်္ဘောတစ်စင်းဖြစ်မည်ကိုသိသောကြောင့်မျက်တောင်ခတ်ကာအမည်တပ်ထားသောသံလိုက်အိမ်မြှောင်သို့သွားသည်။art ဒီအစု၏မျက်စိများအတွက်အားရစရာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာတိုင်း၊ အသုံးပြုတဲ့ build ရွေးချယ်မှုအားလုံးဟာပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ဆောက်လုပ်နေစဉ်တစ်ကြိမ်တည်း တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော တစ်ခုခုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ငါထင်ခဲ့တာလား၊ ဒါကအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိအောင်ကွပ်ကဲထားတဲ့မော်ဒယ်။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၎င်း၏ parts ကိုရွေးချယ်ရေး၏ပစ္စည်းပစ္စယဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် Lego ဒဏ္.ာရီ။ ယင်း၏ရွက်များဖွဲ့စည်းသောထူးခြားသောအလံမှသည်တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောတံဆိပ်များဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်မှartထိုကဲ့သို့သောပုလဲရွှေကဲ့သို့ရှားပါးအရောင်များနှင့် - ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းပထမ ဦး ဆုံးအဘို့ - စိမ်းပြာ။ သူတို့အားအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးပွင့်လင်းရှင်းလင်းသောအပိုင်းပိုင်း၏ဌန်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖျော့။ ပလပ်စတစ်ဖျော်ဖြေမှုမှာ 6x6x9 Corner ခုံးပြားများနှင့် Curved Tops များပါ ၀ င်သည်။ ပြတင်းပေါက်ကြီးလေးခုသည်ပုလင်းရှေ့ဖက်ကွေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောလူအုပ်ကိုတစ်ခုတည်းတွင်မပါ ၀ င်ခဲ့ပါ၊ အမှန်မှာ၎င်းတို့သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရရှိနိုင်ရန်နောက်ဆုံးသောကာလမှာ ၁၉၉၂ Paradisa set, 1992 Poolside Paradise တွင်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမော်ဒယ်နှစ်ခုသာပါရှိသည်။
ဒီစကေးမှာတစ် ဦး ဆောက်လုပ်ရေးလည်းအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်သော Leviathan တွင်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ p ခဲ့သင်္ဘောart မူရင်း Lego Ideas တင်သွင်းမှုတင်ပြမှုသည် ပို၍ ကြီးမားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာဤ minaturised ဗားရှင်းသည်အသေးစိတ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည့်လိမ္မာပါးနပ်မှုရှိရမည်။ သေးငယ်သောအမြောက်များ၊ ရွက်တိုင်များနှင့်ရွက်လွှင့်မှုများသည်အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့ပြီးဤအတိုင်းအတာတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ပုလင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းတွင်အလွန်လိမ္မာပါးနပ်သောဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များပါဝင်ပြီးဆောက်လုပ်ချိန်တွင်အကြိမ်များစွာရှိသည် 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော ငါမှရပ်တန့်သော marvel မတူကွဲပြားသည့်ကဏ္sectionsများသည်မည်သည့်perfectlyရိယာအတွင်းတွင် ချိတ်ဆက်၍ မရသော်လည်းတန်းစီ။ တန်းစီနေသည်။ p ၏ထိုကဲ့သို့သောအောင်ပွဲarts နှင့်ကွပ်မျက်မှုသည်များသောအားဖြင့်အစုတစ်ခု၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစကေး၏အမြင့်ဆုံးအထိတွန်းရန်လုံလောက်လိမ့်မည်။
သူများသည်ကြီးမားသောကွေးပြတင်းပေါက်၏ပထမ ဦး ဆုံးအဓိကအားနည်းချက်ကိုအစာကျွေး တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော။ သာလေးကြိမ်အသုံးပြုခဲ့မှို Lego Group ၏ထုတ်ကုန်လိုင်းတစ်ခုလုံးနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဤအစုအဖွဲ့တွင်သာတွေ့ရလိမ့်မည် (ကျွန်ုပ်တို့သိသည်အတိုင်း) တန်ဖိုးရှိသောထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကိုများစွာသောကမ်းလှမ်းမှုများတွင်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ပုံနှိပ်ထားသောသံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ တစ်ခုတည်းအစုများအတွက်ထုတ်လုပ်အပိုင်းအစပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်မဟုတ်ပေမယ့်သူတို့ကစျေးကြီးပုံသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကိုသုံးပါကြောင့်စျေးနှုန်းမြင့်တက်။
နောက်ဆုံးရလဒ်မှာဤအစု၏စျေးနှုန်းသည်၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်လုံးဝမညီမျှမှုကိုခံစားရသည်။ မနှစ်က 21309 နာဆာ Apollo Saturn V ကို ကံမကောင်းတာကသူ့ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ငါ့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ် 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော startအခြား ဦး တည်ချက်၌ငါ့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် element ၁၀၀၀ နီးပါးရှိသောအပိုင်းအစတစ်ခုရှိပြီး qu တစ်ခုထက်ပိုသည်artသူတို့ထဲက er - တိကျမှန်ကန်ဖို့ 284 - ရေကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လျော့ရဲရဲ trans ဆိုတဲ့အပြာ 1 × 1 ကျည်ဖြစ်ကြသည်။
Lego Ideas အစုံမကြာခဏထူးခြားသော p ကိုအသုံးပြု။ ကြောင့်ပရီမီယံကုန်ကျသည်art့နှင့်စတစ်ကာများကျော်ပုံနှိပ်အပိုင်းပိုင်းမျက်နှာသာ။ ထိုကဲ့သို့သောစရိုက်များနှင့်အတူအစုံမကြာခဏအလွန်ကောင်းစွာရောင်းနေဆဲကြီးမားတဲ့ပန်ကာအခြေစိုက်စခန်းကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာတစ်ခုခုကိုပေးဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိသောကွောငျ့။ စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်သောပြthisနာမှာ၎င်းသည်တွန်းအားပေးမည့်အစားမဟုတ်ဘဲကတိက ၀ တ်ဝယ်ယူမှုဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်ကိုသာဤကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်ကိုသာရှာဖွေနေကြသောပရိသတ်များရှိပါသလား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် - အနီးကပ်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကဲ့သို့ခံစားရ၏ Architecture မော်ဒယ်များနှင့်၎င်းတို့၏အရွယ်အစားအချိုးအစားမညီမျှမှုနှင့်အတူမော်ဒယ်များပါဝင်သည်ပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာခိုင်မာသွားခဲ့ပါသည်။
ငါ့အဲ့တာကိုသဘောကျတယ် 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော လွမ်းဆွတ်မှုကိုမောင်းနှင်သည့်လိုင်စင်ကို အခြေခံ၍ မဟုတ်ဘဲသီးခြားပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပရိသတ်များကဤအစု၏ပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်များသည် ၀ ယ်ရန်မ ၀ ယ်သည်ကိုသူတို့ကိုများစွာပြောလိမ့်မည်။ သင်ဤမော်ဒယ်ကိုတွေ့ပြီးကြည့်လိုက်ကိုနှစ်သက်ပါက၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာစီမံထားသောကြောင့်စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်စွာကွပ်မျက်ခံရသောသင်္ဘောငယ်တစ်စီးရှိလိုပါကစင်ပေါ်သို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်စားပွဲပေါ်တွင်ပြသရန်လိုပြီးစျေးနှုန်းကိုတက်နိုင်လျှင်၊ 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော.
Lego Ideas 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← အမေဇုံရောင်း LEGO ပါဝင်သည် Star Wars 75180 Rathtar Escape
ပထမ ဦး ဆုံး Lego Star Wars VIP ကဒ်ဘောနပ်စ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုLego Ideas 21313 ပုလင်းပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်သင်္ဘော"
သင် "ဒီပုံစံကိုမြင်ပြီးကြည့်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကောင်းကောင်းလုပ်ထားတာကြောင့်စိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ " လို့ရေးဖို့ဆိုလိုတာလား။ =) ဂရိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအားလုံးအတူတူပင်, ဒီတစ်ခုဝယ်ယူရန်ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်!
ကြီးစွာသောဖမ်း, ငါအမှန်ပင်ပြု၏။ ယခုပြင်သည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်